Izindaba - Kungani i-valve cover gasket izoba ukuvuza kukawoyela?
Izikhathi eziningi lapho ukuvuza kwenjini kungenakugwenywa, ikakhulukazi uma usebenzisa uwoyela omubi, Kunokungcola okuningi emafutheni, Akugcini nje ngokwandisa ukuguga nenjini,
Kungadala nokuvuza kukawoyela.
Ake sixoxe ngokunye ukuvuza kusembozo segumbi le-valve.
Yini ebangela ukuthi ikamelo le-valve livuleke? Ungabhekana kanjani nayo?
Kuyini i-gasket valve cover gasket?
Isembozo se-valve yenjini sivele saziwe nje ngokuthi ikhava yegumbi le-valve.Kuyilungu lokufaka uphawu engxenyeni ephezulu yenjini. Ivalwe ngoyili wenjini ohambelana nepani likawoyela ukuze uwoyela ungaphumi lapho injini isebenza.Ikhanda lesilinda elihambisana nomzimba oyisilinda, i-valve ehambelana nalo ifakwa ekhanda lesilinda, nomzimba wesilinda yakhiwa yaba ikamelo lokucindezelwa elivalwe, ngaphansi kwezimo ezithile, okuvumela ingxube evuthayo ukuthi ishise ngaphakathi kwayo.Isembozo segumbi le-valve ephezulu, ikhava eyisilinda engezansi, umzimba wesilinda ongezansi, nesobho lamafutha langaphansi.
Kungani i-valve gasketwill izoba ukuvuza kukawoyela?
1- Ukuguga kwama-valve cover gasketleads ekuphumeni kukawoyela.
Okokuqala, i-gasket yegumbi le-valve ibisetshenziswe isikhathi eside, kudala ukuguga nokulahlekelwa amandla okuvala ukuvuza kukawoyela.Ukuvala i-gasket yezinto zenjoloba, ngenxa yempilo yesevisi yemoto yinde kakhulu, izinto zenjoloba zizoguga, zibe nzima, ziphume lapho kuvuza khona uwoyela.
Njengoba igumbi le-valve lisengxenyeni engenhla yenjini, uwoyela uzokwehla ngekhanda lesilinda ngemuva kokuvuza kwephedi yegumbi le-valve, ngoba umzimba wenjini usebenza
Emazingeni okushisa aphakeme, uwoyela onamathela ebusweni bomzimba uzophela kancane, ukhiqize intuthu ebabayo.
Kulokhu, vele uvule ikhava yegumbi le-valve bese ushintsha izindleko ze-gasket.valve cover gasketreplacement aziphezulu
I-valve ye-crankcase yokungenisa umoya ephoqelelwe ivinjiwe
I-valve ye-PCV yesistimu yokungenisa umoya crankcase ivaliwe, okudala ingcindezi eyeqile ngaphakathi komshini futhi ekugcineni kubangele ukuvuza kukawoyela ngaphansi kwengcindezi.Uma leli phutha lingatholakali, lizodala inkinga enkulu ngokuhamba kwesikhathi, njengokuvuza kwe-crankshaft oil seal nokunye. kulula kakhulu ukuthola ukuthi ngabe i-valve ye-PCV isebenza ngokujwayelekile yini: ngaphansi kwezimo zokungenzi lutho, isimo sokusebenza kwe-valve ye-PCV singanqunywa ngokushesha ngokuhlola i-vacuum ye-crankcase inlet ngomunwe wakho.
Indlela yokuhlola ye-PCV valve ye-crankcase system yokuphoqeleka okuphoqelelwe:
Yenza injini ingasebenzi, susa i-valve ye-PCV kusuka ku-hose yesembozo se-cylinder, bese uhlola ukuthi ngabe i-valve ye-PCV ivinjiwe yini. Uma ufaka isandla sakho kwijoyini le-valve le-PCV, iminwe yakho izozwa igebe elinamandla.
Enye indlela yokuhlola ukususa ipayipi le-crankcase inlet kusihlungi somoya ngemuva kokufaka i-valve ye-PCV, bese umboza ngobunono ukhakhasi ngephepha lezicubu. Lapho ingcindezi ku-crankcase incipha (mayelana ne-IMIn), kufanele kube sobala ukuthi iphepha lezicubu lidonselwa ekuvulekeni kwepayipi; Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokumisa injini, susa i-valve ye-PCV bese uyihlola ngesandla. Uma kunomsindo "chofoza", i-valve ye-PCV iyaguquguquka futhi iyatholakala.
3- Ukwehluleka kwezinye izingxenye zenjini kuholela ekuvuza kwamafutha.
Ukuguga kwendandatho ye-piston yenjini kuholela ekuvalweni okuxekethile. Lapho injini isebenza ngejubane elikhulu, kwenzeka isimangaliso sokuqothula isilinda, okuholela ekucindezelweni ngokweqile kwegesi yokukhipha, futhi ezimweni ezibucayi, kuholela ngqo ekulimaleni kwe-valve cover gasketsealant kanye nokuvuza kwamafutha.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yekhwalithi kawoyela empofu, ukuqongelela okukhulu kwekhabhoni kwe-piston adhesion, ukufakwa kwe-valve valve gasket akuyona into ejwayelekile, okuholela ekuphatheni okungalingani, njll., Zonke lezi zinkinga zizoholela ekulimaleni kwe-valve cover gasketand ukuvuza kukawoyela.
Ukulimala kokuvuza kwegasket lekhava yenjoloba
Naka imbangela yokuvuza kukaphethiloli we-valve gasketto .Kulimaze injini.
Kunengozi engaba khona yokuphepha njengomlilo odalwe ukuvuza kukawoyela ku-valvecover gasket.
Ngenxa yokuvuza kukawoyela ekhaveni yegumbi le-valve, ukuvuza kukawoyela kuzogeleza kwehle emzimbeni wenjini. Ngenxa yokushisa okuphezulu komzimba wenjini lapho injini isebenza, uwoyela onamathela ebusweni bomzimba wenjini uzophela kancane futhi ukhiqize iphunga elibi. Ezimweni ezimbi kakhulu, uwoyela uzongena emotweni kanye nohlelo lokungenisa umoya, oluthinta imvelo yemoto.
Okwesibili, lapho ikhava yegumbi le-valve livuza ukunamathela kukawoyela ezininginisweni eziningi ze-injini, ingozi ayilula kangako, ukunambitheka okubukhali, imoto ngesivinini esikhulu ehlobo elishisayo, ngoba izinga lokushisa lokuphindaphindeka kokukhipha liphezulu kakhulu, kubangele ukunamathela emlilweni omningi we-exhaust, ukuthungela ezinye izinto ezivuthayo, kungagcina kuholele emlilweni wenjini